WARBIXIN: Isco,Oscar,Pulisic & 5 Xiddig Oo Ay Liverpool U Dhaqaaqi Karto Xagaaga Kadib Markii Ay Isaga Hartay Baacsiga Thomas Lemar – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Isco,Oscar,Pulisic & 5 Xiddig Oo Ay Liverpool U Dhaqaaqi Karto Xagaaga Kadib Markii Ay Isaga Hartay Baacsiga Thomas Lemar
WARBIXIN: Isco,Oscar,Pulisic & 5 Xiddig Oo Ay Liverpool U Dhaqaaqi Karto Xagaaga Kadib Markii Ay Isaga Hartay Baacsiga Thomas Lemar
Kooxda Liverpool ayaa u muuqatay mid u dhaqaaqaysa saxiixa xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Monaco ee Thomas Lemar marka la gaaro xagaaga dambe.
Reds ayaa suuqa ugu jirta badalka Philippe Coutinho kadib markii ay xiddiga reer Brazil 145 milyan oo euro uga iibisay Barcelona bishii hore.
Si kasta ha ahaatee wargayska Liverpool echo ayaa si lama filaan ah u soo wariyay in ay kooxda Liverpool gabi ahaan soo afjartay xiisihii ay u qabtay saxiixa xiddiga.
Xilli ay milkiilayaasha kooxdu diyaar u yihiin in ay dhanka dhaqaalaha ku taageeraan Jurgen Klopp waxa ay u badantahay in ay suuqa galin doonaan lacag waali ah uu u helo xiddigaha diirada u saaran.
Hadaba waxa aan warbixintan ku soo bandhigi doonaa 5 xiddig oo laga yaabo in ay u soo dhaqaaqaan Anfield si ay badal ugu noqdaan coutinho xagaaga.
Christian Pulisic, Borussia Dortmund: Xiddiga reer America ayaa dabcan ah xiddig uu la dhacan yahay tababare Jurgen Klopp isaga oo waliba ah xiddig uu horay ula soo shaqeeyay sidaa darteed u dhaqaaqistiisa ayaa ah mid suurtagal ah.
Isco, Real Madrid: Xiddiga reer Spain ayaa ku dhibaatoonaya kooxda Real Madrid inkasta oo uu qaab ciyaareed cajiib ah ku bilowday xilli ciyaareedkan, Tababare Zidane ayaa si cad u sheegay in uu xiddigan ka iibin doono kooxda dhamaadka xilli ciyaareedkan waxana ay Liverpool ka mid tahay kooxaha xiisaha u qaba adeegiisa.
Malcom, Bordeaux: Xiddiga reer Brazil ayaa si aad ah loola xiriirinayay kooxaha Tottenham iyo Arsenal laakiin Liverpool ayaa ku soo biiri karta tartanka xagaaga inkasta oo ay dhibaatadu tahay in uu xiddigu ka ciyaaro booska mohamed salah ee garabka midig ee weerarka.
Oscar, Shanghai SIPG: Waa Xiddig laga iloobay kubada cagta Yurub kadib markii uu ku biiray kooxda reer shiine ee Shanghai SIPG sanad ka hor isaga oo ka tagay kooxda Chelsea waxana uu horay u sheegay in uu ku soo laaban doono Yurub wakhti dhaw.
Nabil Fekir, Lyon: Xiddiga reer France ayaa ah xiddiga ugu muhiimsan kooxda Lyon isaga oo ka ciyaari kara boos walba oo khadka dhexe iyo weerarka garbaha ah waxana uu xilli ciyaareedkan dhaliyay 16 gool iyo waliba 5 caawin.